निर्वाचन विथोल्न एन्फाकै संस्थापन पक्ष सक्रिय: उपाध्यक्ष शेर्पा | abc.com.np
निर्वाचन विथोल्न एन्फाकै संस्थापन पक्ष सक्रिय: उपाध्यक्ष शेर्पा
Posted by abc staff.2years ago. ( Comments )
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले निर्वाचन विथोल्न आफूलाई संस्थापन बताउने समूह हात धोएर लागेको बताएका छन् । एन्फाभित्र देखिएको आन्तरिक कलहका कारण कार्तिक ८ गते हुने भनिएको निर्वाचन फेरी अनिश्चित बन्ने संभावना बढेको छ । तर एन्फाका उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी शेर्पाले उक्त षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताए ।
उनले भने,‘जब हामीले एन्फालाई भ्रष्टाचाररहित संस्था बनाउने अभियान चालेका थियौं, त्यो अभियान लगभग पुरा हुने क्रममा छ । एएफसी र फिफाले हाम्रो मागलाई संवोधन गरेपछि रिक्त भएको ठाँउमा निर्वाचन हुन लागेको हो । संस्थापन हुँ भन्ने साथीभाईहरुले पदावधि लम्ब्याउन खोज्दा निर्वाचन अनिश्चित भएको थियो । अब निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ, समयमै हुन्छ ।’ उनका अनुसार आगामी कार्तिक ८ गते हुन लागिरहेको एन्फाको निर्वाचन विथोल्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रयास भने भइरहेको छ ।
‘जो नेपाली फुटबलको विकास भएको देख्न चाहादैनन्, जो अस्थिरता कायमै राखेर सँधै पद ओगट्न चाहान्छन्, त्यस्ता साथीभाईहरु निर्वाचनलाई विथोल्न लागिपर्नु भएको छ ।’–शेर्पाले भने । शेर्पाले उच्च नीतिहरुको सर्वोच्च नीति नै राजनीति भएको बताउँदै मुलुकमा मात्र नभई असल राजनीति फुटबलमा पनि हुनुपर्ने बताए । राजनीतिकरणलाई नराम्रो तरिकाबाट फुटबलमा घुसाइएको छ, त्यो गलत हो । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, हेरफेर, नराम्रा कामसँग जोडेर ‘राजनीतिकरण’ जोडिन्छ, त्यो व्याख्या पनि गलत हो । साँच्चिकै यथार्थ राजनीति नेपालमा भइदिएको भए फुटबलको मात्र होइन, मुलुकै कायापलट भइसक्थ्यो । त्यसैले राजनीतिकरणको सट्टा विकृति र विसंगती जस्ता शब्दको चयन हुनुपर्ने उनले आफ्नो धारणा राखे । म्याच फिक्सिङ काण्ड सार्वजनिक भएपछि नेपालले स्तरीय दुई वटा प्रतियोगीतामा जित हात पारिसकेको छ । एन्फाको पदाधिकारीहरुको संलग्नता विना उक्त म्याच फिक्सिङ असंभव रहेको बताउँदै खेलाडीहरुलाई भन्दा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनले दोर्‍याए । कुल ६९ भोट रहेको वर्तमान एन्फामा ४० भन्दा बढि मत कर्माछिरिङको पक्षमा देखिएका छन् ।